Aza Lazaina Aman’Olona Fa Miady Amin’ny Sivana Ho Avy Ny LiveJournal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2014 23:29 GMT
Lany tany amin'ny Duma, antenimieram-pirenena tao Rosia ny volavolan-dalàna iray hampitovy laharana ireo bilaogera malaza amin'ny mediam-bahoaka [tatitry ny Global Voices]. Ny hany andrasana izany izao dia ireo pitsipitsony izay fombafomba ihany sisa handanian'ny Filankevitra Federaly, ary hankatoavan'ny Filoha Vladimir Putin azy io. Toa miseho ankehitriny ny zavatra misy, hoe manomboka amin'ny 01 Aogositra 2014, ireo Rosiana bilaogera manana mpanjohy mihoatra ny 3000 isanandro dia mila manoratra ny mombamomba azy toy ny ataon'ireo gazety rehetra anaty aterineto. Na izany aza, ireo goavana sasantsasany amin'ny RuNet dia efa mandefa valinkafatra sahady, manaporofo mialohan'ny fotoana fa ho nofy ratsy ny fampiharana izany lalàna izany.
Tany amboalohany, natsahatry ny Yandex.ru, milina Rosiana fikarohana isan'ny matanjaka indrindra, ny fanomezana laharana ireo bilaogy [tatitry ny Global Voices] tao amin'ny tranonkalany. Ny 23 Aprily i Dmitry Pilipenko, filoha mpitarika ny LiveJournal Russia, dia nampakatra[ru] ity vaovao manaraka ity tao amin'ny bilaoginy LJ :
Manomboka anio, izay rehetra mombamomba ny tena any anaty bilaogy sy vondrom-piarahamonina any, ka manana namana mpanjohy mihatra ny 2.500, dia hisy soratra hoe “2.500 + ” eo amin'ny toeran'ny isan'izay mpampiasa tena “Naman'i”. Ny tena isa dia ny tompon'ny bilaogy ihany no ho afaka mijery azy na ny mpandrindra ny vondrom-piarahamonina.
Tsy maintsy ampiako hoe ireo fanovàna ireo dia izay mampiasa ny tolotra Cyrillic ao amin'ny LiveJournal ihany no iharany.
Ny fanomezana laharana ireo mpampiasa sy ireo vondrom-piarahamonina, izay niainga avy amin'ny fitsidihana ny pejy, dia hatsahatra ihany koa.
Ireo fiovàna tetsy ambony dia mifototra amin'ny drafitra handraisana fepetra mba hanatsaràna bebe kokoa ny tolotra. Kisendrasendra izay rehetra mety ho fifanandrifian-javatra amin'ity.
Pi-mason'i Pilipenko tany ampiafaran'ity resadresaka ho an'ny mpanao gazety ity no nitondra fanazavana hoe natao hanasarotana ny fametrahana ilay fepetra ho avy momba ireo manana mpanjohy 3.000 ity hetsika ity. Kanefa, mampisalasala ihany ny hoe ho afaka hanao zavatra hanakana an'i Roskomnadzor amin'ny farany izany — any am-parany dia afaka mandrakariva mampiseho ny sandry beny i Kremlin, ary hanana fahafahana miditra amin'ireo lohamilin'ny LiveJournal avy ao anatiny. Angamba ilay fanahin'ny fanoherana no tena zava-dehibe.